फेसवुकमा चिनजान भएको पुरुषको भर पर्दा के भयो ? ४५ जनाले दिए उजुरी – GALAXY
फेसवुकमा चिनजान भएको पुरुषको भर पर्दा के भयो ? ४५ जनाले दिए उजुरी
नेपाली महिलालाई भारत हुँदै कम्बोडिया लगेर बे च बि खन गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि उनको एक ठूलो समुह नै रहेको खुलेको हो ।पक्राउ पर्नेमा धनकुटा सहिदभूमि गाउँपालिका २ का ३७ वर्षीय किसान राई छन्।
राईलाई अन्य ४५ जना महिला तथा पुरूषलाई कम्बोडिया पुर्‍याएको आरोप छ। उनका समुहका ७, ८ जना अन्य ब्यक्ति कम्बोडियामा छन् । जसले नेपालवाट लगिएका महिलाहरुलाई अनैतिक काममा लगाउने गर्छन । होटल र रेष्टुरेष्टहरुमा उनीहरुलाई गलत काम गराइन्छ । घरेलु कामदार भनेर लगेर उनीहरुलाइ त्यहाँ फरक काम गराइने गरेको खुलेको हो ।